सार्वजनिक स्थलमै मास्क लगाउँदैनन् अधिकांश काठमाडौंवासी - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
सरकार दिउँसो कोरोना सर्दैन ?
सार्वजनिक स्थलमै मास्क लगाउँदैनन् अधिकांश काठमाडौंवासी
अनुपम भट्टराई || 23 April, 2021
कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । आइतवार यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पहिलो दिन १ हजार ९६, सोमवार १ हजार २ सय ८१, मंगलवार १ हजार ७ सय ३६, बुधवार २ हजार ३ सय ५१ र बिहीवार २ हजार ४ सय २८ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । साथै केही दिन यता संक्रमितको मृत्यु पनि त्यत्तिकै मात्रामा बढिरहेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दोे छ ।
२०७८ साल लागेयता मात्रै ५९ जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ । सरकारले पनि सबैलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन गरेको थियो । तर, आम मानिसले भने अझै पनि मापदण्ड पालना गरेको पाइदैन । यो दृश्य हेर्न कतै टाढा जानै पर्दैन । काठमाडौं उपत्यकाका भीडभाड हुने स्थान, ठमेल, रत्नपार्क, वसन्तपुर, स्वयम्भू र बौद्ध आदि ठाउँमा छरपस्ट रूपमै मास्क नलगाइ हिँडेका मानिसको भीड देख्न सकिन्छ ।
ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक स्थानमा अनिवार्य मास्क लगाउनका लागि चेक जाँचमा कडाइ गरिरहेको छ । तैपनि मानिसहरू अरुको अनि आफ्नै स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न छाडेका छैनन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका भीडभाड हुने स्थान, ठमेल, रत्नपार्क, वसन्तपुर, स्वयम्भू र बौद्ध आदि ठाउँमा छरपस्ट रूपमै मास्क नलगाइ हिँडेका मानिसको भीड देख्न सकिन्छ ।
बिहीवार दिउँसो माथि उल्लेखित ठाउँहरूमा अत्याधिक भीडभाड थियो । मास्क नलगाइ हिँड्ने, मास्क गोजीमा बोक्ने, चिउँडोमा मास्क लगाउने, हातमा राख्ने र प्रहरीले चेक गर्न आएमा मात्र लगाउने गरेको दृश्य देखियो । (यी ठाउँहरूमा मेरो लाइफस्टाइलको टीम पुग्दा कैद गरेको तस्विर हेर्नुहोस् ।)
मुख्य सहरमै पालना भएन स्वास्थ्य मापदण्ड
काठमाडौंको भीडभाड हुने स्थानमा पर्दछ, स्वयम्भूनाथ क्षेत्र । यो क्षेत्रमा हरेक दिन स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूले भीड लाग्छ । तर अहिले सबैका लागि चिन्ताको कोरोना र सार्वजनिक स्थानमा चासोको विषय मास्क, स्यानिटाइजर र सामाजिक दूरी पालना नगर्नेहरूको जमात कम छैन । त्यहाँ पुग्दा धेरै मानिसहरू मास्क नलगाइ बसिरहेका थिए । जब प्रहरीसहित मिडिया त्यहाँ पुगेर क्यामेरा र माइक तेर्सायो, त्यसपछि कसैले चिउँडोको मास्क मुखमा तान्न थाले भने कसैले गोजीको मास्क निकालेर लगाउन थाले । यसरी स्वास्थ्यको खेलवाड गर्नेहरू किशोरकिशोरी, युवादेखि वृद्धवृद्धासम्म पर्छन् । स्वयम्भू क्षेत्रमा भेटिएका एक वृद्ध भन्छन्, ‘भर्खर हिँडेर आएको, स्याँ स्याँ भएँ र मास्क खोलेको हो, लाइहाल्छु ।’
यतिसम्म कि कसैले त मास्क बोकेका पनि छैनन् । यसरी लापरवाही गर्नेहरूसँग मेरोलाइफस्टाइलले किन मास्क लगाउनु भएन भनेर सोध्दा उनीहरू अनुत्तर रहे भने कतिपयले हिँडेर स्याँ स्याँ भएको, सेल्फी खिच्न खल्तीमा राखेको भन्ने बहाना पनि बनाउन भ्याए । ‘फोटो खिच्न खोलेकी हुँ, अब लगाउँछु,’ वसन्तपुर क्षेत्रमा मास्क नलगाउने एक किशोरी भन्छिन् ।
मेरोलाइफस्टाइलले किन मास्क लगाउनु भएन भनेर सोध्दा उनीहरू अनुत्तर रहे भने कतिपयले हिँडेर स्याँ स्याँ भएको, सेल्फी खिच्न खल्तीमा राखेको भन्ने बहाना पनि बनाउन भ्याए ।
यस्तै लापरवाही गर्ने मानिसहरू काठमाडौंको मुटु मानिने वसन्तपुर र ठमेलमा पनि भेटिन्छन् । यो क्षेत्र पर्यटकले जुनकुनै बेला पनि भरिभराउ देखिन्छ । अझ विशेष वसन्तपुर क्षेत्रमा अहिले सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा चलिरहेको छ । त्यहाँ रथ तान्ने र रथ नजिक सयौँ भेला भइरहेको देखिन्छ । तर, त्यस्तो भीडमा पनि मास्क विनाको जमात ठूलो छ । ती दृश्यले कोरोनालाई गिज्याइरहेको आभास गराउँछ ।
बौद्ध क्षेत्रमा पनि दिनमा सयौँ पर्यटक जाने गर्दछन् । शान्त वातावरणमा रहेको यो क्षेत्रमा मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिती हुन्छ । तर, कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको अवस्थालाई वेवास्ता गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गर्नेहरूको भीड बौद्धमा पनि छ । बिहिबार वौद्धमा भेटिएका मानिसमध्ये कसैले मास्क नै लगाएका थिएनन् भने मास्क लगाउनेहरू पनि कसैको चिउँडोमा, कसैको हातमा देखिन्थ्यो । बौद्ध क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने मुख्यद्वारमै मास्क बिना प्रवेश निषेध लेखिएको छ । त्यो पढ्छन्, तैपनि मास्क नलगाई हेपाई पारामा स्तुपा प्रवेश गर्ने गरेको पाइयो ।
बौद्ध क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने मुख्यद्वारमै मास्क बिना प्रवेश निषेध लेखिएको छ । त्यो पढ्छन्, तैपनि मास्क नलगाई हेपाई पारामा स्तुपा प्रवेश गर्ने गरेको पाइयो ।
रात्रिकालीन व्यवसाय, स्कूल र कलेज बन्द
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनप्रतिदिन बढिरहेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै भीडभाड नगर्न, स्कूल र कलेज बन्द गर्न भनिसकेको छ । साथै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले बनाएका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, आम मानिसले भने यसलाई लापरवाही गरिरहेको पाइन्छ । स्कूल र कलेज भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका छन् भने पूर्व निर्धारित परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यस्तै कोरोनाबाट प्रभावित जिल्लामा रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्न भनिएको छ । तर, कतिपय व्यवसायीहरूले भने सरकारको यो निर्देशन विरुद्ध उत्रिएका छन् ।
ठमेलका व्यवसायीको प्रश्नः सरकार दिउँसो कोरोना सर्दैन ?
सरकारले गरेको रात्रिकालीन व्यवसाय बन्दको निर्णयमा अधिकांश व्यवसायी सहमत छैनन् । गत सोमवार सरकारले रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का उपाध्यक्ष राजुमान डंगोल सरकारले गरेको यो निर्णयप्रति प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘ए सरकार, दिउँसो कोरोना सर्दैन ?’
यदि दिउँसो कोरोना सर्दैन भने राती किन बन्द ? उनी सरकारसँग यसको उत्तर जान्न चाहन्छन् । काठमाडौं उपत्यकाका अत्याधिक भीडभाड हुने स्थानमा आफूले नियाल्दा दिउँसै मास्क नलगाएर हिँड्ने मानिस डंगोलले धेरै देखेका छन् । कोरोना लाग्छ भने दिउँसो पनि लाग्छ । राती व्यवसाय गर्न नपाउने भए दिउँसो कसरी कोरोना सर्दैन भन्ने प्रमाण उनी सरकारसँग माग्छन् । सरकारले प्रमाण दिन नसक्ने हुँदा ठमेलका व्यवसायी सरकारले गरेको निर्णय मान्ने पक्षमा छैनन् ।